व्यवसायीको लागि काम नगर्ने, अनि संस्थामा टाँसिरहने, हामी त्यसको अन्त्य चाहन्छौं : तामाङ | Capital Khabar ::
गृह अन्तरबार्ता व्यवसायीको लागि काम नगर्ने, अनि संस्थामा टाँसिरहने, हामी त्यसको अन्त्य चाहन्छौं :...
व्यवसायीको लागि काम नगर्ने, अनि संस्थामा टाँसिरहने, हामी त्यसको अन्त्य चाहन्छौं : तामाङ
सूर्यबहादुर तामाङ, महासचिवका प्रत्यासी उम्मेदवार – काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ
महासचिवको उम्मेदवार बन्नुभएको छ किन ?
यस क्षेत्रको विकृती, विसंगतीहरुलाई अन्त गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितमा काम गर्नका लागि मैले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको हँु । साना निर्माण व्यवसायीहरु माथि बर्षौदेखिको थिचोमिचो छ । त्यस्तै राज्य र हामी व्यवसायीहरु बीच पनि ठु्लो खाडल छ । मालिक र नोकरको बीचमा हेर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसलाई हटाई सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको अन्तका लागि काम गर्ने हेतुले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
तपाईले देखेको यस क्षेत्रको समस्या के के हुन् ?
समस्या त धेरै छन् । भूक्तानी प्रणालीमा समस्या छ । जुन अनुसार सम्झौता भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको भूक्तानी हुदैन । राज्यले हामीलाई निकै अपहेलना गरेको छ । हामी राज्यको पाँचौ अंग हौ । तर पनि हामीलाई अझै सम्म मुलुकको विकास निर्माणको साझेदारको रुपमा लिन सकेको छैन । सधै ठेकेदारको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको छ । समय अनुसार यस क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ सोही अनुसार जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै प्राविधिकको पनि प्रमुख समस्या रहेको छ । हामी साना व्यवसयाीहरुले प्राविधिक राखेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी प्राविधिहरुले हामीले शतप्रतिशत काम गरेपनि ७० प्रतिशत मात्र काम भएपछि लखेट्ने गरेको प्रवृती व्याप्त छ । जसको निराकरणका लागि यस अघिको नेतृत्वले खासै प्रयास गरेको छैन ।
तपाई विजयी हुने आधार के हो ?
मैले विगत १०–१२ दिन देखिको चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा धेरै व्यवसायीहरुसँग भेट गरे । उनीहरुले मलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । संस्थामा धेरै लामो समय देखि एउटै व्यक्तिले हालीमुहाली गरिरहेको छ । त्यसकारण नयाँ व्यक्तिको खोजीमा छौ । तपाईले आट गर्नुभएको छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । सानो व्यवसायीहरुलाई पनि माथि उठाउन उनीहरुको हकहितका लागि लड्न भनेर मैले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको हो । त्यसकारण म विश्वस्त छु मलाई साथीहरुले विश्वास गर्नु हुने छ ।
उसो भए अव सहमतिय नेतृत्व चयनको अवस्था सकिएको हो ?
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि हामीले प्रयास नगरेका होइनौ । धेरै प्रयासहरु गर्यौ तर ती प्रयासहरु सफल हुन नसकेपछि हामी निर्वाचनमा होमिएका हौ । मैले अघि पनि भने हामी हाम्रा प्रतिस्प्रधीहरुलाई भन्यौ तपाईहरुले विगतमा संस्थामा धेरै समय विताई सक्नु भयो । तर व्यवसायीको हकहितमा खासै काम गर्न सक्नु भएन । अव तपाईहरुले हामीलाई अवसर दिनुस् हामी केही गर्न चाहन्छौ भनेको हो तर उहाँहरुले संस्थामा बसेर समग्र निमार्ण व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्नुभएन ।
यहाँ टासी रहनु पर्ने के छ ? त्यही भएर होला सायद उहाँहरुले सजिलै छाड्न चाहनु भएन । विगतमा पनि उहाँहरुले संस्थामा रहेर आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउने बाहेक अन्य खासै काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण ठाउँमात्र ओगटेर बस्ने प्रथाको अन्तका लागि हामी निर्वाचनमा होमिन बाध्य भएका हौ । त्यसर्थ यो निर्वाचनले काम गर्ने व्यक्तिलाई संस्थामा पठाउने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अघिल्लो लेखमाचितवनको राप्ती नदीले खतराको सूची नाघ्यो, सचेत रहन प्रशासनको आग्रह
अर्को लेखमाबाढीका कारण देशभरका विद्युत् प्रणाली अबरुद्ध
चुम्किएका नारायणकाजिको भबिस्य संकटमा; कांग्रेस संग मिलेका बाबुराम को जित निश्चित
काठमाडौँमा एका बिहान चल्यो गोलि!
को को छानिए कांग्रेस उम्मेदवार !(सुचिसहित)
को को छानिए माओवादी उम्मेदवार !(सुचिसहित)
बार्सिलोना द्वारा मालागा पराजित
अमेरिकी अनुदानः परियोजना कसरी अघि बढ्छन्?
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता आज
७३ प्रतिशत मत खस्यो प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा
बाटोमा जाम भयो ? अफिस जना ढिला भयो ? नआत्तिनुस स्काई...
माओबादी-कांग्रेस गठबन्धनको अर्को चमत्कार:५० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए देउबाले